पाककला : स्वादिलो र पोषिलो पनि - ichchhakamananews
खानाबाट आनन्द लिन, स्वादको अनुभव गर्न र स्वास्थ्य राम्रो बनाउन पाककला महत्वपूर्ण छ । सामान्य लाग्छ, तर पाककला हाम्रो स्वास्थ्य र स्वादसँग अभिन्न रुपमा जोडिएको विषय हो
खाना पकाउनु आफैँमा एउटा कला हो । जसरी एउटा सुन्दर कलाकारको मेहनतले एउटा सुन्दर कलाकृतिको रचना हुन्छ, त्यसरी नै एउटा मेहनती गृहिणीले कलात्मक र मीठो खाना तयार पार्न सक्छिन् । खाना पकाउने कला केटामान्छे होस् या केटीमान्छे दुवैका लागि कलात्मक हुन सक्छ ।
खाना पकाउले कलाको इतिहास खोतल्ने हो भने आजभन्दा ५ लाख वर्ष पहिले मान्छेले आगोलाई आफू अनुकूल प्रयोगमा ल्याउन थालेको बताउने गरिन्छ । भनिन्छ त्यो समयमा आगोम झुक्किएर मासुको टुक्रा खस्यो, आगोले त्यो मासुलाई नरम मात्रै बनाएन स्वादिलो पनि बनायो । यही आधारमा खाना पकाएर खानु पर्छ भन्ने मान्यताको विकास हुँदै आयो । त्यसैले जति धेरै प्रविधिको विकास हुँदैछ, पाक कलामा पनि त्यति नै धेरै सुधार हुँदैछ ।
माइक्रोवेव गर्नु स्वास्थ्यको लागि कत्तिको फाइदा ?
खानालाई माइक्रोवेव गरेर खानुलाई मान्छेले पछिल्लो समय उपयोगी मान्ने गरेका छन् । थोरै समयमात्रै तातोमा राख्दा यसमा रहेका पोषक तत्व कम मात्रामा नष्ट हुन्छ र यो शरीरको लागि फाइदाजनक हुन्छ भन्ने कुरा पोषणविद्हरू बताउँछन् ।
पोषणविद्हरूका अनुसार हरिया सागसब्जीलाई माइक्रोवेभमा तताउँदा २०देखि ३० प्रतिशतसम्म मात्रै पोषक तत्व नष्ट हुने भएकोले माइक्रोवेव गरेर खाना खानु उपयुक्त हुन्छ ।
भोजन स्वस्थ राख्नको लागि फ्राइ गर्ने कि स्टर फ्राइ गर्ने ?
खाना बनाउने बेलामा खाना धेरै मान्छेलाई फ्राइ गरेर पकाउने गर्छन् । तर यथार्थ यो हो कि सबै खाद्य पदार्थ फ्राइ गरेर मात्रै खानु उपयुक्त हुँदैन । माछा ओमेगा ३ फ्याटी एसिडको सबैभन्दा राम्रो स्रोत हो । जसले कैयौं स्वास्थ्य लाभ हासिल गर्ने गर्छ । तर यसलाई उच्च तापमा पकायौं भने यसले पूरा पोषक तत्व प्रदान गर्ने गर्दैन ।
उदाहरणको लागि यदि हामीले ट्युना माछालाई फ्राइ ग¥यौं भने ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म ओमेगा ३ को कन्टेन्ट घट्न जान्छ ।
स्टर फ्राइमा एउटा ठूलो कराइमा धेरै ताप दिएर खानालाई एकदमै कम समय पकाउने गरिन्छ । यसमा तेल र मक्खनलाई यसमा पकाउने गरिन्छ ।
बाफमा खाना पकाउनु सबैभन्दा उत्तम विकल्प
खाना पकाउने कलामध्ये बाफमा खाना पकाउनु सबैभन्दा उत्तम विकल्प मान्ने गरिन्छ । खासगरी पानीमा घुलनशील भिटामिनको संरक्षणको लागि यस्तो तरिकाले पकाएको खाना उपयुक्त मान्ने गरिन्छ । विभिन्न शोध अनुसार पुष्टि भएको छ कि पालक, ब्रोकाउली जस्ता कखाद्य पदार्थलाई बाफमा पकाउनुले ९ प्रतिशतदेखि १५ प्रतिशतसम्म भिटामिन सीको कमी हुने गर्छ । यसमा पाकिसकेपछि नुन, मसला या तेल राखिदिन पनि सकिन्छ ।
उमाल्नुलेको खानामा पोषक तत्व बढी हुन्छ ?
खाना उमालेर खानु खाद्य संस्कारको पुरानो एउटा संस्कार हो । विश्वका कतिपय संस्कृतिमा अहिलेसम्म पनि खाना उमालेर खाने गरिन्छ । गुन्द्रुक जस्ता कतिपय खानेकुरा उमालेर खाने गरिन्छ । यस्तो खाद्यपदार्थ प्रायः थोरै मात्रामा केही कुरा हालेर धेरै पानी मात्रैलाई पिउने गरिन्छ ।
खाना पकाउने समयमा धेरै पोषक तत्व पाउने टिप्स
खाना पकाउने समयमा पोषक तत्वको कमीलाई पूर्ति गर्नको लागि कम्तीमा यी कुरालाई ध्यान दिनु जरुरी छ ।
–भोजनलाई उमाल्ने समयमा सकेसम्म कम पानीको प्रयोग गर्नुहोस् ।
–यदि तपाईं मांसाहारी खानेकुरा बनाइरहनु भएको छ भने यसमा मासुलाई निकालेर धेरैबेर रसलाई मात्रै पकाउनुहोस् ।
पकाएको तरकारीलाई एकदिनभन्दा धेरै फ्रिजमा राखेर पनि नखानुहोस् । किनकि हावाको सम्पर्कका कारण यसमा भएको पोषक तत्व नष्ट हुन्छ ।
यदि सम्भव हुन्छ भने खाद्य पदार्थलाई पकाउनुपूर्व होइन । पकाइसकेपछि काट्नुहोस् ।
–तरकारी पकाउने बेलामा त्यसलाई केवल केही मिनेट मात्रै पकाउनुहोस् ।
यी कुराहरूमा ध्यान राखौं
खाना पकाउने समय केही नियमहरूको पालना गर्नुहोस् । याद गर्नुपर्ने कुराहरुमा खाना पकाउने अवधि, तापमान र पकाउने तरिकाहरू पर्छन् ।
खाना पकाउने केही तरिकाहरू अरू तरिकाको तुलनामा स्वास्थ्यबद्र्धक हुने गर्छ । उदाहरणको लागि ‘डिप फ्राइ’ वा धेरैबेर भुट्नुको तुलनामा केहीबेर मात्रै भुटेको तरकारी धेरै स्वास्थ्यबद्र्धक हुन्छ । स्टर फ्राइले पनि कम तेलको प्रयोग गर्नुका साथै भोजनलाई अधिक पौष्टिक बनाउन पनि मद्धत गर्ने गर्छ ।
प्रकाशित मिति :आश्विन १५, २०७७ बिहिवार - १३:१०:१६ बजे